मन्त्री नेम्वाङलाई नागरिक संघ संस्थादेखि जेष्ठ नागरिकसमेतको बधाई र शुभकामना « Mechipost.com
मन्त्री नेम्वाङलाई नागरिक संघ संस्थादेखि जेष्ठ नागरिकसमेतको बधाई र शुभकामना
प्रकाशित मिति: १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार २१:००
फिदिम, १३ मङ्सिर
एकदमै सरल र मिजासिलो स्वभावका प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएको खवरले जिल्लावासी हर्षित भए । मुस्कुराएर बोल्ने, समय र स्थानअनुशार आफूहरु रुपान्तरित गर्ने, सबै मानिसहरुसँग सहजै घुलमिल हुनसक्ने खुबीले नेम्वाङ जिल्लावासीमाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ । तेश्रो पटक सांसद् चुनिएपछि नेम्वाङ मन्त्री हुनेमा जिल्लावासी आशावादी थिए । उहाँ मन्त्री नियुक्त हुने चर्चासँगै वधाईको ओइरो लाग्यो । २० महिना लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।
सबैसँग हार्दिकता साट्ने बानीले नेम्वाङलाई सधैँ जनताको प्रिय बनाएको छ । सदरमुकाम फिदिमको नेम्वाङ परिवारको सन्तान भएपनि चुनाव मार्फत गाँउ–गाँउमा बामपन्थी चेतना भरेर लोकप्रियता कमाउनुभएका उहाँलाई दुर्गम भेगका मानिसले पनि उत्तिकै माया गर्छन् । फिदिमकै रैथाने भएकाले यहाँ उहाँ मन्त्री भएकामा हर्ष नसाट्ने मानिस एकदमै कम छन् ।
भोली हुने उपनिर्वाचनमा नेम्वाङ पनि मतदाता हुनुहुन्छ । फिदिम नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर मोक्तान तामाङको २०७६ साउन ६ गते निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न उहाँ हिँजो साँझ फिदिम आइपुग्नु भयो । गृहजिल्लामा आइपुग्दा उहाँको पहिलो गन्तब्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी कार्यालय बन्यो ।
“मन्त्रीको हैसियतले मैले जनताको मुक्ति र समृद्धिको धरोहर हाम्रो पार्टीको पवित्र मन्दिर यस कार्यालयबाट मेरो जिल्लाको यात्रा र कार्य प्रारम्भ गरेको छु” पार्टी कार्यालयमा स्वस्फुर्त भेला भएका सयौँ कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो “यस पवित्र मन्दिरको सन्देशलाई, तपाईँहरुको अभिमत र पार्टीको निर्देशनलाई शिरोधार्य गरेर एक इन्च पनि बाँकी नराखी मेरा कार्य अघि बढाउनेछु ।”
नेम्वाङ आइपुग्नुभन्दा एक घण्टा अघिबाटै नेकपा पाँचथरको फिदिमको शनिवारेलाइन स्थित कार्यालयमा नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यहाँ उहाँलाई भेट्न पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुक मात्रै नभई कहिल्यै कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा नदेखिने गृहिणीदेखि बालबालिका समेत पुगेका थिए । हिँजो साँझबाट सुरु भएको उहाँसँगको भेटघाट र बधाई दिने क्रम आजसम्म उस्तै छ ।
“तपाईँ यो जिल्लाबाट एकदमै महत्वपूर्ण ठाँउमा पुग्नुभएको छ । जनतालाई सेवा दिने कार्यमा सधैँ तत्परता देखाउनुहोला । तपाईँ मन्त्री भएपछि पाँचथर जिल्लाले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छौँ” नेपाली काँग्रेस पाँचथरका नेता सुरेन्द्रप्रसाद तिमल्सिनाले नेकपा पार्टी कार्यालयमा मन्त्री नेम्वाङलाई बधाई दिँदै भन्नुभयो ।
फिदिमका जेष्ठ नागरिकहरुदेखि बालबालिकासम्मले नेम्वाङलाई भेटेरै बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन् । जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाहरुले कार्यक्रम आयोजना गरेर उहाँलाई बधाई ज्ञापन गरिरहेको छन् । नेम्वाङ मन्त्री चयन भएकोमा जिल्लाले न्याय पाएको अनुभूति भएको नेकपाका नेता कार्यकर्ताको भनाई छ ।
“हाम्रो लामो प्रतीक्षालाई अन्ततः हाम्रो पार्टी र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले पूरा गरिदिनु भएको छ”, नेकपा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारीले भन्नुभयो, “हामीले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छौँ ।” त्यसमा पनि नेम्वाङलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पाँचथरको गरिमालाई उच्च पार्ने सफलता मिलेको भण्डारीको भनाई छ ।
मन्त्री नेम्वाङ तेश्रो पटक पाँचथर जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको हो । यसअघि उहाँ २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा पनि पाँचथर क्षेत्र नं. १ बाट विजयी हुँदै प्रतिनिधिसभामा पुग्नुभएको थियो । उहाँले दुवै संविधानसभाका निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्ने अवसर पाउनुभएको थिएन् । अहिले भने सिङ्गो जिल्ला एकै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र बनेको छ र उहाँ सिङ्गो जिल्लाको पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभएको छ ।
त्यहि जिम्मेवारीको जगमा उहाँ विकास निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । “समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने वर्तमान सरकारको सोचलाई ब्यवहारिक रुपमा नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाँचथर जिल्लाले पाउनु एकदमै खुसीको विषय हो”, नेकपा प्रदेश कमिटीका सदस्य हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’ले भन्नुभयो ।
जनतासँगको लोकप्रियताकै कारण नेम्वाङलाई बधाईको ओइरो लागेको हो । उहाँलाई प्रतिस्पर्धी दल नेपाली काँग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरुले समेत बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेका छन् । अधिकांशले नेम्वाङले धेरै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको खुसी ब्यक्त गर्दै यस मन्त्रालयमा सफल हुनसके नेम्वाङको राजनीतिक यात्रा नयाँ उचाईतर्फ लम्कने आँकलन समेत गरेका छन् ।
नेम्वाङ मन्त्री चयन भएपछि नेकपाका कार्यकर्तामा थप उर्जा देखिएको छ । पाँचथर प्रदेश क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ प्रदेश नं. १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ । मन्त्री आङ्बोको पहलमा पाँचथरमा झण्डै रु. चार अर्बका विकास आयोजना अघि बढेका छन् । त्यसमाथि नेम्वाङ समेत विकास निर्माण गर्ने संघीय सरकारको मन्त्रालयमा पुगेपछि जिल्लाको रुप बदलिने आम नागरिकको अपेक्षा छ ।
नेम्वाङले भोली विहान फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको सचिवालयका गणेश योङहाङले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री नेम्वाङ आइतवार राजधानी काठमाण्डौँ फर्कने कार्यक्रम छ ।